चर्चित मोडल पार्वती राईको मुटुमा आगो बाल्ने युवक को हुन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
चर्चित मोडल पार्वती राईको मुटुमा आगो बाल्ने युवक को हुन् ?
पाल्पा, वैशाख १७ । गायिका मालिती खरेल पछिल्लो समय मुटुमा आगो बोलको गीतका कारण चर्चामा छिन् ।
खुमन अधिकारी र गायिका खरेलले गाएको गीतलाई नयाँ शैलीमा नृत्य निर्देशक शंकर बिसीले निर्देशन गरेका छन् भने चर्चित कोरियोग्राफर गम्भिर विष्ट र पार्वती राईको अभिनय रहेको छ ।
फिल्मी शैलीमा छायांकन गरिएको मालतीको मुटुमा आगो बोलको गीतका शब्द शृजना जेके अधिकारी झलेन्द्रले गरेका हुन् ।
जसमा खुमन र झलेन्द्रको लय रहेको छ । भिडियोलाई राजेश घिमिरले छायांन गरेका हुन् भने नविन घर्तीमगरले सम्पादन गरेको भिडियोले प्रेममा परेका एक जोडीको कथालाई जीवन्त शैलीमा भिडियोमा उतारिएको छ ।